Guta reNgirozi pasi peCOVID-19 kuwedzera kwechitatu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Guta reNgirozi pasi peCOVID-19 kuwedzera kwechitatu
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Technology • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
Bangkok, kuMabvazuva mamiriro.
Uye guta harizive izvo guta riri kuwana.
Iyo creme de la creme yenyika chess mune show nezvose kunze kwaYul Brynner
Nguva inomhanya inoita senge miniti
Sezvo iyo Tirolean spa yaive neve chess vakomana mairi.
Shanduko dzese hauzive here izvozvo iwe
Tamba padanho iri hapana yakajairwa nzvimbo.
Iri Iceland kana Philippines kana Hastings kana ino nzvimbo!
Humwe husiku muBangkok uye oyster yako yepasirese.
Izvi zvinodzoka, asi panguva ino, Bangkok ichavharwa zvakare, nekuda kwechitatu wave COVID-19.
Matanho akaomarara, kusanganisira nguva yekumira kuenda kumba, ichaiswa muBangkok nemapurovhinzi mashanu ari pedyo kwemavhiki maviri kutanga nemusi weMuvhuro sezvo hurumende ichiedza kudzora huwandu hwehutachiona hweCovid-19.
Nguva yekudzoka kubva pa9pm kusvika 4am ichaiswa mumatunhu mana ekumaodzanyemba kweNarathiwat, Pattani, Songkhla neYala.
Mitemo yakasimba ichave iriko kuGreater Bangkok, inosanganisira guta guru uye matunhu mashanu akapoteredza eNonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Samut Prakan naSamut Sakhon.
Vhiki mbiri chete iyo yekufambisa neyekushanya indasitiri muThailand kusanganisira muBangkok, inozivikanwa seGuta reAngeles yaive nemwenje wetariro zvishoma kupfuura mashoma mavhiki maviri apfuura apo a rondedzero yezvakavhurwa muBangkok yakaziviswa zvakanyanya. Mavhiki maviri apfuura mamwe marudzi enzvimbo nemabhizinesi muBangkok akabvumidzwa kutangazve mashandiro kutanga June 22, 2021.
Nhasi uno yaive nhoroondo yakapera nguva apo Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) yakazivisa matanho akasimba ekumisikidzwa kuGreater Bangkok anosanganisira kuvharwa kwezvitoro zvezvitoro Masupamaketi anotenderwa kugara akavhurika kusvika na8 manheru, zvisinei.
Mitemo mitsva pane izvo zvakavhurwa kana zvakavharwa muBangkok zvinoraira:
Eateries dzese kuvhara ne8pm.
Shandira imba inokurudzirwa kumabhizinesi ese.
Kuteedzera kwakasimba kwenzanga dzekudzora nharaunda.
Hapana masevhisi eruzhinji kubva na9pm kusvika 3am.
Kuvharwa kwemapaki eruzhinji na9pm.
Kuvharwa kweese mabhizimusi-ane njodzi mabhizinesi senge salons, spas uye echinyakare masaja parlors.
Hapana kuungana kwevanopfuura vanhu vashanu, kunze kwekunamata mabasa.
Nzvimbo dzekutengesa uye misika yehusiku yakavharwa kubva 8pm kusvika 4am.
Nzvimbo dzekuongorora dzaizomiswa kubva Mugovera kumatunhu ese kuodza moyo vanhu kuti vafambe.
Yechitatu COVID-19 kuvhiya parizvino iri kurwisa Thai Capita yeBangkok nekusvika kwenzvimbo yeDelta yakatanga kuwanikwa muIndia. Mhosva nyowani dzakawedzerawo mumatunhu mana ekumaodzanyemba. MuSouth Thailand, iyo Beta musiyano ndiyo honzeri. Musiyano weBeta unozivikanwa senzira yekuSouth Africa
Thailand yakawana rekodhi yakakwira ye75 kufa neChitatu uye yechipiri-yepamusoro nhamba yehutachiona hutsva, we9,276 9,635, neChina. Huwandu hwepamusoro hwezvirwere zvezuva nezuva hwaive 17 75 muna Chivabvu 19. Nhasi XNUMX vanhu vakafa muThailand pa COVID-XNUMX.
Thailand ine vanhu vangangosvika mamirioni makumi manomwe. Thailand ndiyo nhamba makumi manomwe nepfumbamwe pasi rose ine 70 makesi pamamiriyoni ehuwandu kubva hutachiona hwawanikwa. Kuenzaniswa iyo United States ine 104,244 pamiriyoni uye ine chinzvimbo chinosuruvarisa chegumi nenhatu kwepamusoro pasi.
Muhuwandu hwerufu, Thailand inongova nhamba 166 ne38 vakafa pamamirioni. United States iri nhamba makumi maviri neshanu pasirese nevane 21 vakafa pamamirioni.
Kune zvakare kushomeka kwakakomba kwemubhedha sezvo varwere vazhinji vanogara kwenguva yakareba muzvipatara uye mwero wekubuda unononoka. Vanhu vanopfuura mazana manomwe vari pamhepo.
Prime Minister Prayut Chan-o-cha, vaive sachigaro musangano weCCSA neChishanu, vanonzi vakaraira zviremera kuchengetedza hutachiona hutsva mukati menguva yekuvhara uye vakati matanho ese ekurwisa kuputika achachinjika kuti vagone kurarama nehutachiona hunokurumidza kupararira. .
Mutungamiriri wehurumende akasarudzawo kutora mari yemwedzi mitatu yekubhadhara mari kuti achengetedze bhajeti rehurumende yekurwisa denda iri. Mamwe makurukota ehurumende akazoteverawo.
Gen Prayut inogamuchira 125,590 baht pamwedzi, kubva pamubhadharo we75,900 baht uye mvumo yemugove ye50,000 bah. Haatambire muhoro segurukota redziviriro. Nhengo yedare remakurukota inobvumidzwa kugamuchira muhoro kubva pachinzvimbo chimwe chete, chinobhadharwa zvakanyanya.
Kuganhurira kukiya kumatunhu akasarudzwa kwakafarirwa nevatungamiriri vebhizinesi kudzikisira kukanganisa kwehupfumi.
Bangkok richava guta reNgirozi zvakare uye Humwe husiku muBangkok unoita murume akaoma kuzvininipisa zvakare.